राधाले राजधानी आएर मञ्चमै रुँदै भनिन्- मलार्इ “बाेक्सी” देख्नेको आँखा फुटोस — Imandarmedia.com
राधाले राजधानी आएर मञ्चमै रुँदै भनिन्- मलार्इ “बाेक्सी” देख्नेको आँखा फुटोस
काठमाडौँ, ३ चैत ।
बोक्सी आरोपमा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-५, देउकलीमा ६ घण्टासम्म लगातार कुटपिटमा परेकी युवती बोक्सी प्रथाविरुद्धको अभियानमा सरिक बनेकी छन् ।
स्थानीय २० वर्षीय राधा चौधरी शुक्रबार बोक्सी प्रथाविरुद्धको अभियानमा सरिक भएकी हुन् । ‘मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै राष्ट्रिय जागरण अभियान’ ले आयोजना गरेको चेतनामूलक कार्यक्रममा उनी सहभागी भएकी हुन् ।
सोही अवसरमा उनलाई सामूहिक अभिनन्दन समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बाल्दै राधाले आफू निर्दोश भएको बताइन् । ‘म निर्दोश मान्छेलाई कुटपिट गरेर मलाई अपहेलना गर्नु भयो’, उनले भनिन्, ‘मलाई गरिएको यो अभिनन्दनले उहाँहरुको पनि आँखा खुलोस् ।’ त्यस घटनाको बारेमा स्मरण गर्दा उनी ब्यासमै रोएकी थिइन् ।
राधाले भनिन्- ‘यो अभियानले मलाइ सम्मान गरेको छ यस कारण मलाइ “बोक्सी” देख्नेको आँखा खुसोस यति गर्दा पनि उनीहरुको आँखा खुल्दैन तिनका आँखा सधैका लागी फुटोस।’ अभियानका संयोजक गोविन्दशरण उपाध्यायका अनुसार सोही अवसरमा बोक्सीप्रथाविरुद्धको सामाजिक चलचित्र ‘अग्नीदह’ पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
त्यसै गरि घोडाघोडी नगरपालिकासँग जोडिएर रहेको गौरीगंगा नगरपालिकामा पनि सोही अभियान शुरु भईरहेको ओरेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सरिताले जानकारी दिइन् ।
नगरपालिकाका न्यायीक समितिले कैलालीमा क्रियाशील संस्थासँग समन्वयन गरि अभियान थालेको जानकारी दिइन् । फाया नेपालले फागुन ३० र चैत १ गतेका दिन वडा नं. ८ र ७ मा जनचेतना मूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
राधामाथि “बोक्सी” आरोपमा फागुन २४ गते लगातार ६ घण्टासम्म चरम यातना दिँदै कुटपिट गरिएको थियो । देशभर धुमधामसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै पुरुषहरुले पनि महिलालाई समान व्यवहार गर्ने मात्र होइन, महिला हिंसाविरुद्ध हातमा हात मिलाएर लड्ने प्रतिवद्धता राधामाथि भने निर्घात कुटपिट गरिएको थियो ।
घोडाघाडी नगरपालिका-५ देउकलीमा भने २० वर्षीया एक युवतीमाथि लगातार ६ घन्टासम्म निर्घातरुपमा कुटपिट हुँदा गाउले भने रमिते बनेका थिए । आफूलाई भोले बाबा बताउने एक युवक र अर्की युवतीले ताण्डव नृत्य देखाउदै स्थानीय किशोरीमाथि यातना दिइरहँदा सिंगो वस्तीका मानिस भने रमिता हेरेर बसिरहनुले समाजमा चरम अन्धविश्वास कायम छ भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।
राधामाथि भएको अमानवीय यातनापछि उक्त नगरपालिकाका मेयर समेत विवादमा मुछिएका थिए । पीडितलाई न्याय दिनुको साटो मेयर ममता चौधरीले उल्टै पीडकहरुलाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाएर घटनालाई गाउमै मिलाउने कोशिस गरेका थिए ।
उक्त घटनापछि मेयर चौधरीलाई एमालेले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कारबाही गर्ने बताएको थियो भने यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तत्काल पदबाट राजिनामा दिन आव्हानमा गरेका थियो । पदबाट राजिनामा नदिए कारबाही गर्ने समेत नेकपाले चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै मेयर चौधरीमाथि अज्ञात समुहले सोमबार साँझ गोली हानेको थियो । सुख्खडस्थित घरैमा भएको गोली प्रहारबाट घाइते भएका चौधरीलाई तत्काल घोडाघोडी अस्पताल सुख्खडमा भर्ना गरिएको थियो ।
उनको कैलालीमा उपचार हुन् नसकेपछि हाल काठमाडौँको टिचिङ्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । राधामाथि गोली हानिएको घटनामा विवादास्पद बनेपछि उक्त घटनालाई लिएर चौधरीमाथि गोली हानिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान थियो । तर प्रहरीले उक्त गोली काण्डमा संलग्नताको आशंकामा नेकपाका ३ जना नेताहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ ।
यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मेयर चौधरीको गोलीकाण्डमा अाफ्नो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । प्रहरीले अाफ्ना तीन नेतालाई प्रहरीले राति घरबाटै गिरफ्तार गरेको घटनाप्रति नेकपा कैलालीका इन्चार्ज महानले अापत्ति जनाएका थिए ।
चैत ३ गते नेकपाको अाह्‍वानमा कैलाली बन्द, यस्तो पो रहेछ कारण (विज्ञप्तिसहित)
राधामाथि कुटपिट हुँदा रमिते बनेका मेयरलाई कसले हान्यो गोली ? अवस्था चिन्ताजनक !
कैलाली ‘बोक्सीकाण्ड’बारे नेकपाको धारणा बाहिरियो, भ्रष्ट मेयरलाई कडा चेतावनी (विज्ञप्तिसहित)
आमालाई पिटेर फर्काइयो, बुबालाई दर्शक बनाइयो ! को थिए ती ‘देवता’ जसले राधालाई बचाए ?
एमालेले मेयर चौधरीमाथि गर्ने भयो कारबाही, हेर्नुहोस् कारण यस्तो गम्भीर छ
राधामाथि लात्ती र मुड्की बर्साउने भोलेबाबाबारे नयाँ तथ्य बाहिरियो, युवतीमाथि यौन शोषण गरेको खुलासा
राधा ६ घण्टासम्म निर्घात कुटिदाँ रमिते बनेका मेयरले दिए यस्तो गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति (हेर्नुहोस् अन्तरवार्ता)
कान्तिपुरमा भारत छिर्दा ठुलै लफडा, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र अखिलेशद्वारा राजीनामा
लागुऔसध दुर्ब्यशनी बिरुद्धको अभिमुखीकरण कार्यक्रम चन्द्रागिरीका २ बिध्यालयमा
जेलमुक्त भएपछि ओली-प्रचण्डको मुख्यालय पुगेर ढुंगेलले भावुक हुदैँ यसो भने (भिडियोसहित)